भेन्टिलेन्टर हेर्दै ज्यान गुमाउँछन् कोरोना सङ्क्रमित « Mero LifeStyle
टीकापुर नगरपालिका–१ का ४५ वर्षीय एक पुरुष चार दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनमा सुधार नभएपछि आफन्तले भेन्टिलेटरको खोजि गरेर कोहलपुर लैजाने निणर्य गरे । भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार गर्नुपर्ने उनलाई उच्च उपचारकक्षबाट एम्बुलेन्समा राख्दै गर्दा आइतवार उनको ज्यान गयो । ‘भेन्टिलेटर हुँदासमेत हामीले उपचार पाएनौँ । उपकरण भएर पनि त्यसको प्रयोग नहुँदासम्म कुनै काम नहुँदोरहेछ । आफन्तलाई अकालमै गुमायौँ’, उनका एक आफन्तले भने, ‘उपचारकक्षमा राखिएका तिनै भेन्टिलेटर हेरेर बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने सरकारले जनशक्ति दिन किन कन्जुस्याइँ गरेको होला ?’
अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेण्डेण्ट डा रेमकुमार राईले अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्ति, स्रोत साधनको प्रयोग गरेर उपचार गरिरहेको बताएका छन् ।
अस्पतालले हाल २० शैय्याको एचडीयू (उच्च उपचारकक्ष) स्थापना गरेर कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्दै आएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेण्डेण्ट डा रेमकुमार राईले अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्ति, स्रोत साधनको प्रयोग गरेर उपचार गरिरहेको बताएका छन् । ‘आंशिकरूपमा भेन्टिलेटर हामीले चलाइरहेका छौँ, हामीले लिएको तालिमका आधारमा उपचार भइरहेको छ’, डा राईले भने, ‘एनेस्थेसियोलोजिष्ट भएको भए भेन्टिलेटर ट्युबको प्रयोग गरेर कृत्रिम श्वास दिएर उपचार गर्न सकिन्थ्यो । एनेस्थेसिया नहुँदा भेन्टिलेटर चलाउन सकिएको छैन । उपकरण भएर पनि जनशक्ति नहुँदा बिरामीलाई जोगाउन मुस्किल हुन थालेको छ ।’
सोमवार कार्यपालिकाको बैठकले अस्पतालका लागि गाउँपालिकाले खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले बताए ।
आइसीयू सञ्चालनमा आउन नसक्दा कोरोना सङ्क्रमितलाई थप उपचारका लागि धनगढी र नेपालगञ्ज पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । ती ठाउँमा रहेका अस्पतालमा समेत कोरोना सङ्क्रमितले सहजरूपमा उपचार पाउन नसक्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । स्थानीयवासीले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर भए पनि तत्काल आइसीयू सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दीपक रावलले जनशक्तिको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको भन्दै आइसीयू सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गर्दा पनि सफल हुन नसकेको बताए । ‘गत वर्षदेखि नै एनेस्थेसिया माग्दै आएका छौँ, आफू पनि खोजिरहेका छौँ तर पाउन सकेका छैनौँ’, अध्यक्ष रावलले भने, ‘सङ्घीय मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि सबैलाई भन्दाभन्दै थाकिसक्यौँ, स्थानीय सरकारले पनि सुनुवाइ गरेको छैन । अहिले त फोन पनि उठ्दैन ।’ अध्यक्ष रावलले अस्पतालमा भएका पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने जनशक्ति नहुँदा बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको गुनासो गरे ।
दश विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल पाँच जना मात्रै कार्यरत छन् । तीमध्ये तीन करारमा कार्यरत छन् ।
कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि जानकी गाउँपालिकाले एनेस्थेसियालोजिस्टका लागि माग गरेको छ । सोमवार कार्यपालिकाको बैठकले अस्पतालका लागि गाउँपालिकाले खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले बताए । उनले पहिले पनि अस्पतालसँग समन्वय भए पनि अन्य पालिकासँग पनि समन्वय भइरहेका कारण निर्णय गर्न ढिलाइ भएको बताउँदै एनेस्थेसियाका लागि खर्च हुन आउने रकम गाउँपालिकाले खर्च गर्ने बताए ।
मास्कको भारी : कोही लाउँदै नलाई, कोही चलाको चलाई
के कोरोना जैविक हतियार हो ?
निषेधाज्ञामा घर बस्दा के खाने, के नखाने ?
कोरोना संक्रमितले कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने ?